Syria oo ka erisay safiiro reer galbeed ah xilli Russia & China ay diideen in xoog la… – SBC
Syria oo ka erisay safiiro reer galbeed ah xilli Russia & China ay diideen in xoog la…
Posted by Webmaster on June 6, 2012 Comments
Dimishiq:- Xukuumadda Syria ayaa shaaca ka qaaday in dalkeeda ka eriday safiiro iyo dublumaasiyiin reer galbeed ah taasi oo loo tixraacayo waxa ay ugu yeertay Syria saan saan ku gud oo loola jeedo waa fal u dhima falkii ay ku kaceen dalalkaas.
Wasaaradda arrimaha dibadda Syria ayaa sheegtay in qaar kamid ah safiirada reer galbeedka ku sugan dalka Syria ay noqdeen shaqsiyaat aan laga doonayn dalkeeda joogitaankooda.
Tirade safiirada dalkeeda eek a eriday 17safiir ayaa waxaa kamid ah safiiradda dalalka Mareykanka, Faransiiska , Britain iyo Turkiga.
Talaabadan ayaa ku soo beegmaysa toddobaad kadib markii ay qaar kamid ah xukuumaddaha caalamka ay ka eryeen dalalkooda dublumaasiyiinta Syria.
Bayaanka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa lagu sheegay in xukuumadda Syria ay qaadatay qaraarka deg dega ah si loo taabageliyo talaabo lamid ah talaabada ay qaateen dalaka safiirada Syria ka eryey dalalkooda.
Dhanka kale telvison-ka qaranka china ayaa baahiyey kulan ku dhexmaray magaalada Beijing ee xarunta dalka China madaxweynaha dalka china Huu Jiin Taawn iyo dhigiisa dalka Russia Vladimir Butin oo lagu taageeray qorshaha ergayga QM iyo Jaamacadda carabta ee arrimaha dalka Syria Koffi Annan.
Labada madaxweyne ayaa ugu baaqay beesha caalamka in ay sii wado taageerada dadaalka dhexdhexaadinta ee uu wado Koffi Anna iyo ergada ka socota QM ee kusugan dalka Syria.